ဒုက္ခခံရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ | Determined to Suffer | Real Conversion
မတ်လ ( ၁၀ ) ရက်၊ စနေနေ့ ညနေပိုင်းတွင်
Saturday Evening, March 10,2018
“ကောင်းကင်သို့ဆောင်ယူခြင်းကိုခံတော်မူသောအချိန်ရောက် သောအခါ၊ ယေရုရှလင်မြို့သို့ တူရှုကြွအံ့သောငှါ သဘော ထားတော်မူ၏။” ( လုကာ ၉း ၅၁ )
ဒေါက်တာ John Gill က “ယခုသည် အချိန်ကျရောက်ပြီဖြစ်၍ ယေရှုသည် သူ့အလုပ် ကို အဆုံးသတ်စေရန် မြေနိမ့်ပိုင်းဂါလိလဲပြည်ကိုစွန်ခွါပြီး မြင့်သောအရပ် ယုဒပြည်အရပ်သို့ သွားရပေမည်။ ထိုမှတဆင့် ယေရုရှလင်မြို့သို့သွားရမည်။ ထို့နောက်တွင် သူသည် ဂါလိလဲ ပြည်သို့ နောက်ထပ် ဘယ်တော့မှ သွားမှမဟုတ်ပါ။ ယေရုရှလင်သို့သွားရန်သာဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါ သည်။ သူသည် ထိုအရပ်တွင် အဘယ်အရာကို ရင်ဆိုင်တွေ့ကြုံရမည်ကို သိသော်လည်း ဆုံး ဖြတ်ချက်ချခဲ့သည်။ သူသည် လူသားတို့၏အပြစ်ကိုသယ်ဆောင်ရမည်။ ပညတ်တရား၏ကျိန် ခြင်း၊ ဘုရားသခင်၏အမျက်တော်တို့ကို ခံရမည်။ သူသည် များစွာသောရန်သူ၊ လူနှင့်သူကို စောင့်ကြည့်နေသည့်မာရ်နတ်တို့ကို၎င်း၊ နာကျင်ခြင်း၊ ရှက်ကြောက်စရာများ၊ နောက်ဆုံး သေ ခြင်းကိုပါ ကျော်ဖြတ်သွားရပါမည်။ သို့ရာတွင် ထိုအရာများက သူ့ကို မတုန်လှုပ်စေပါ။ သူသည် [ မျှော်လင့်ထားသောအရာပေါ်တွင် ] ခိုင်မာစွာ ရပ်တည်နေပါသည်” ဟုဆိုပါသည်။ (John Gill, D.D., An Exposition of the New Testament, The Baptist Standard Bearer, ၁၉၈၉ ၊ အတွဲ ၁၊ စာ- ၅၈၉၊ လုကာ ၉း ၅၁ မှတ်စု )
“ကောင်းကင်သို့ဆောင်ယူခြင်းကိုခံတော်မူသောအချိန်ရောက် သော အခါ၊ ယေရုရှလင်မြို့သို့ တူရှုကြွအံ့သောငှါ သဘောထားတော်မူ ၏။” ( လုကာ ၉း ၅၁ )
“သူသည် ယေရုရှလင်ဘက်ဆီသို့ ခိုင်ခိုင်မာမာ မျက်နှာမူလျက်” လက်ဝါးကပ်တိုင်ပေါ်တွင် အသေခံရန် မျှော်လင့်သည်။ ဤအခြေပြုကျမ်းထဲမှာ တွေးစရာအကြောင်းအရာသုံးချက်ကို ယူ ဆောင်လာပါသည်။
၁။	ပထမအချက်၊ ခရစ်တော်သည် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် လက်ဝါးကပ်တိုင်ဆီ သွားခဲ့ ပါသည်။
ခရစ်တော်၏လက်ဝါးကပ်တိုင်ပေါ်အသေခံခြင်းသည် မတော်တဆမှု မဟုတ္ပါ။ လုံး၀ မဟုတ်ပါ။ ထိုအကြောင်းကို တပည့်တော်တို့အား ကြိုတင်မိန့်ဆိုခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။
“လူအကြီးအကဲ၊ ယဇ်ပုရောဟိတ်အကြီး၊ ကျမ်းပြုဆရာတို့၏ ငြင်း ပယ်ခြင်းကို၎င်း၊ အသေသတ်ခြင်းကို၎င်းခံရမည်။ သုံးရက်မြောက် သောနေ့၌ ထမြောက်တော်မူလိမ့်မည်ဟူသောအကြောင်းများတို့ ကို မိန့်တော်မူ၏။” ( လုကာ ၉း ၂၂ )
တဖန် သူတို့အား ကြိုတင်မိန့်ဆိုခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။
“ထိုသို့ ယေရှုပြတော်မူသမျှကို လူအပေါင်းတို့သည် အံ့ဩချီးမွမ်း ကြစဉ် တပည့်တော်တို့အား၊ သင်တို့သည် ငါ့စကားကို နားထောင် မှတ်မိကြလော့။ လူသားကို လူတို့လက်သို့အပ်နှံရသောအချိန်နီးပြီ ဟု မိန့်တော်မူ၏။ ထိုစကားတော်၏အနက် မထင်ရှားသဖြင့် တပည့်တော်တို့သည် နားမလည်မရိပ်မိဘဲနေကြ၏။ အနက်ကို လည်း မမေးမလျှောက်ဝံ့ကြ။” ( လုကာ ၉း ၄၄-၄၅ )
လက်ဝါးကပ်တိုင်ပေါ်တွင်အသေခံဖို့ ယေရုရှလင်မြို့သို့သွားမည်အကြောင်းကို တပည့်တော် များက လုံး၀ နားမလည်ကြပေ။ သို့ရာတွင် ခရစ်တော္က ထိုအကြောင်းကို သိခဲ့သည်။ နာ လည်သဘောပေါက်ခဲ့သည်။ အကြောင်းမှာ ရှင်လုကာ ခရစ်ဝင်ကျမ်းတွင် ခရစ်တော်က တတိ ယအကြိမ်မိန့်ဆိုခဲ့ပါသည်။
“ထိုအခါ ကိုယ်တော်သည် တကျိပ်နှစ်ပါးသောတပည့်တော်တို့ကို ခေါ်၍၊ ငါတို့သည် ယေရုရှလင်မြို့သို့ ယခုသွားကြ၏။ ပရောဖက် များရေးမှတ်သမျှသည် လူသား၌ ပြည့်စုံရလိမ့်မည်။ တပါးအမျိုး သားတို့လက်သို့ အပ်နှံခြင်း၊ ပြက်ယယ်ပြုခြင်း၊ ညှဉ်းဆဲခြင်း၊ တံ ထွေးနှင့်ထွေးခြင်းကို ခံရလိမ့်မည်။ သူတို့သည် လူသားကို ရိုက် ပုတ်၍ သတ်ကြလိမ့်မည်။ သုံးရက်မြောက်သောနေ့၌ ထမြောက် လိမ့်မည်ဟု မိန့်တော်မူ၏။ ထိုစကားတော်တခွန်းကိုမျှ တပည့် တော်တို့သည် နားမလည်ကြ။ ထိုအကြောင်းအရာသည် ဝှက်ထား လျက်ရှိသည်ဖြစ်၍ မိန့်တော်မူချက်အနက်ကို မရိပ်မိကြ။” ( လုကာ ၁၈း ၃၁- ၃၄ )
တပည့်တော်များက ယေရှုအား ဂျူးလူမျိုးတို့၏ဘုရင်နှင့်မေရှိယအဖြစ် နန်းတင်ရန် လို လားကြသည်။ လက်ဝါးကပ်တိုင်ပေါ်၌ အသေခံရမည့်အကြောင်းရင်းကို လုံး၀ နားမလည်နိုင် ကြပါ။ အဘယ့်ကြောင့်သေရသနည်း။ လုကာ ၁၈း ၃၄ က “ဤစကားကို သူတို့အတွက် ဝှက် ထားလျက်ရှိသည်” ဟုဆိုသည်။ ခရစ်တော်သည် သေခြင်းမှထမြောက်ပြီး “၎င်းတို့၏နားလည် မှုဥာဏ်ကိုဖွင့်ကာ မိန့်တော်မူသည့်စကားမရှိသည်တိုင်အောင် ထိုအကြောင်းကို သူတို့နားမ လည်ကြပေ။ ထို့ကြောင့် ခရစ်တော်သည် ကျမ်းစာလာသည်အတိုင်း ဒုက္ခဝေဒနာခံစား၍ ကျမ်း စာလာသည်အတိုင်း သုံးရက်မြောက်သောနေ့တွင် သေခြင်းမှထမြောက်တော်မူခဲ့သည်” ( လု ကာ ၂၄း ၄၅- ၄၆ ) ဟု လာသတည်း။ ထို့ကြောင့် တပည့်တော်တို့သည် ခရစ်တော်သေခြင်းမှ မထမြောက်မှီတိုင်အောင်( ယောဟန် ၂၀း ၂၂၊ ၂၄-၂၈ ) ဧဝံဂေလိတရားအကြောင်းကို လုံး၀ နားမလည်ကြပေ။ ( ၁ ကော ၁၅း ၁-၄ )
သို့ရာတွင် ယေရှုက ယေရုရှလင်မြို့သို့သွားရသည့်အကြောင်းရင်းကို နားလည်သ ဘောပေါက်ခဲ့ပါသည်။ တမန်တော် ယောဟန်က ယေရှုည် “သူ့အပေါ်ကျရောက်လာမည့်အရာ မှန်သမျှကို သိရှိတော်မူသည်” ( ယောဟန် ၁၈း ၄ ) ဟု ဆိုထားသည်။ သို့သော် သူသည် လက် ဝါးကပ်တိုင်ပေါ်တွင်အသေခံရန် “ယေရုရှလင်မြို့သို့ တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ဖြင့် မျက်နှာမူခဲ့သည်” ဟုဆိုသည်။ ( လုကာ ၉း ၅၁ ) ဘုရားသခင်သည် ဂေသရှေမာန်ဥယျာဉ်အတွင်း၌ ကျွန်ုပ်တို့အ ပြစ်ဝန်ကို သူ့အပေါ်တင်၍ ၎င်း၏စိတ်ဝိညာဉ်ကို ချေခဲ့ကြောင်းကို သိရှိခဲ့သည်။ ၎င်းမှာ ထိုညတွင် ချွေးစက်များသည် သွေးစက်များကဲ့သို့ကျသည့်တိုင်အောင် ဘုရားသခင်အား သေ ခြင်းမှကယ်တော်မူမည်အကြောင်းဆုတောင်းသည်အထိဖြစ်ခဲ့သည်။ နောက်တစ်နေ့နံနက်တွင် သူသည် လက်ဝါးကပ်တိုင်ပေါ်သို့သွားရတော့မည်ဖြစ်သည်။ ပုန္တိပိလတ်မင်းသည် သူ့ကို ကြာ ပွတ်ဖြင့်ရိုက်သတ်မည်ကိုလည်း သိသည်။ ရိုက်သည့်အချိန်တိုင်း နောက်ကျောသည် အရိအရွဲ များကျလာသည်၊ သွေးများစီးကျလာသည်၊ အရိုးပေါ်အရေတင်ဖြစ်လာသည်၊ ကြာပွတ်နှင့်ရိုက် သူတို့သည် သူ့ကို ပျက်ရယ်ပြု၍ စော်ကားကြပေလိမ့်မည်။ သူ့၏အစီအစဉ်များ ပို၍ပင် ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းအောင်ဖြစ်စေကြပါသည်။ သူသည် လက်ဝါးကပ်တိုင်ပေါ်တွင် သံမှို ဖြင့် ရိုက်သတ်ခြင်းကိုခံရန် ယေရုရှလင်မြို့သို့သွားရမည်ကို ခရစ်တော်က သိခဲ့သည်။ ခြေဖဝါး လက်ဖဝါးများကို သံမှိုဖြင့် ရိုက်ထားမည်ကိုလည်း သိပါသည်။ ထို့နောက် စစ်သားများသည် သူ့အား လက်ဝါးကပ်တိုင်ပေါ်သို့ တင်ကြသောအခါ သူသည် နာရီပေါင်းမြောက်များစွာ မြှောက်ထားခြင်းခံရသည်။ အဝတ်အချည်းစီးရှိသည်။ နေပူပူထဲတွင် မသေမှီတိုင်အောင်ရှိနေခဲ့ ပါသည်။ ယေရှုက ဤအရာအားလုံးဖြစ်ပျက်လာမည်ကိုသိသည်။ သူသည် ယေရုရှလင်သို့ ဒုက္ခခံရန်၊ အသွေးသွန်းရန်၊ နှင့်အသေခံရန် သွားရမည်အကြောင်းကို သိသည်။ သို့သော် “သူ သည် တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ဖြင့် ယေရုရှလင်ဘက်ဆီသို့ မျက်နှာမူခဲ့သည်။” ( လုကာ ၉း ၅၁ ) သူ သည် ထိုသို့သွားရန် မည်သည့်တွန်းအားပေးမှုမျှမရှိပါ။ လုံးဝမရှိပါ။ သူသည် ဆန္ဒအလျောက် သွားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။
“…. ထိုသခင်သည် မိမိရှေ့၌ထားသောဝမ်းမြောက်ခြင်းအကြောင်း ကြောင့်၊ ရှက်ကြောက်သောအရာကိုမမှတ်ဘဲ လက်ဝါးက်တိုင်၌ ခံပြီးမှ၊ ဘုရားသခင်၏ပလ္လင်တော်လက်ျာဘက်၌ ထိုင်နေတော်မူ ၏။” ( ဟေဗြဲ ၁၂း ၂ )
ယေရှုခရစ်သည် “သူ့ရှေ့တွင်ချထားလျက်ရှိသော ဝမ်းမြောက်ခြင်းအတွက်” “ယေရုရှလင် ဘက်ဆီသို့ မျက်နှာကိုမူလျက် သွားခဲ့သည်။” လက်ဝါးကပ်တိုင်ပေါ်တွင် အသေခံရန်ပင်ဖြစ်ပါ သည်။ အားလုံးမတ်တပ်ရပ်ပြီး “တိုင်တော်တွင်” သီချင်း ထပ်ဆိုကို သီဆိုကြပါစို့။
( “တိုင်တော်နားကျူး” Fanny J. Crosby, ၁၈၂၀-၁၉၁၅ )
အားလုံးထိုင်နိုင်ပါသည်။ ခရစ်တော်သည် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ကားတိုင်ပေါ်သို့သွားခဲ့ပါသည်။
၂။ ဒုတိယအချက်၊ ခရစ်တော်သည် သာဓကထားခဲ့ရန် လက်ဝါးကပ်တိုင်ဆီသို့ သွားခဲ့သည်။
Harry Emerson Fosdick ကဲ့သို့သော ရှေ့ခေတ်က သမ္မာကျမ်းစာကို ငြင်းပယ်သည့် လီဗရယယ်များသည် ထိုအချက်ကို အလွန်အကျွံအလေးအနက်ထားပြောဆိုကြသည်ကို ကျွန်ုပ်သိသည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် သူတို့အလေးအနက်ထားပြောဆိုရန် အခြားအ ကြောင်းအရာမရှိပါ။ သို့သော် သမ္မာကျမ်းစာထဲတွင်ရှိသော အချက်တစ်ခုသာ ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့လည်း တခါတရံ ဟောပြောသင့်ပါသည်။ တမန်တော်ပေတရုသည် လီဗရယ်မဟုတ် ပါ။ သူက ဤသို့ဆိုပါသည်။
“ခရစ်တော်သည် ငါတို့အတွက်ခံတော်မူသည်ဖြစ်၍၊ ခြေတော်ရာ သို့လိုက်လျှောက်စေခြင်းငှါ ပုံသက်သေကိုထားတော်မူပြီ။” ( ၁ ပေ ၂း ၂၁ )
ခရစ်တော်သည် ဒုက္ခခံပြီးအသေခံရန် “ယေရုရှလင်ဆီသို့ဦးတည်သွားခဲ့သည်။” စစ်မှန်သော ခရစ်ယာန်တိုင်းသည် သူ၏ “သာဓက” ကို လိုက်လိုသောစိတ်ရှိရမည်။ ( ၁ ပေ ၂း ၂၁ ) အမှန် အကန်ပြောင်းလဲလာသော ခရစ်ယာန်တိုင်းသည် ကျွန်ုပ်တို့၏သာဓကကြီးဖြစ်သော ခရစ်တော် နည်းတူ ဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းနှင့်အခက်အခဲများကို ကျော်ဖြတ်လိုစိတ်ရှိရမည်။
“ကြွယ်၀ခြင်းဧဝံဂေလိတရား” အကြောင်းဟုအမည်တွင်သောအရာကို ဟောပြော သောသူတို့က ယခုအချိန်၌ အလွန်လူသိများကြသည်ကို သဘောပေါက်ပါသည်။ Benny Hinn, Joel Osteen, နှင့် TBN ပေါ်က များစွာသောသူတို့သည် “ကြွယ်ဝချမ်းသာခြင်း” အ ကြောင်းကို အဆက်မပြတ် ဟောပြောကြသည်။ သို့ရာတွင် ၎င်းသည် အစွဲအလန်းသာဖြစ်ပါ သည်။ သင်တို့သည် ယခုမှစ၍ နှစ်အနည်းငယ်တွင် အလွန်အကျွံကြားရမည် မဟုတ် ( လုံးဝမ ဖြစ်နိုင် ) တော့ပါ။ ကမ္ဘာကြီး၏အကြမ်းဖက်ဝါဒပေါ်ထွက်လာသည့်အတွင်း၌ ၎င်းသည် အစသာ ရှိပြီး လူများစွာတို့က “ကြွယ်ဝချမ်းသာသတင်းကောင်” သည် မှားယွင်းသော သင်ကြားပေး ခြင်းဖြစ်သည်ကို သတိပြုမိလာကြမည်။ စစ်မှန်သော ဧဝံဂေလိတရားသည် မိမိကိုယ်ကိုငြင်း ပယ်ပြီး လက်ဝါးကပ်တိုင်ကိုထမ်းစေသည့်အသက်တာကို အစစ်အမှန်ပြောင်းလဲစေသော အ ရာဖြစ်ပါသည်။ ယေရှုက ဤသို့ဆိုပါသည်။
“ငါ၌ဆည်းကပ်လိုသောသူဖြစ်လျှင် ကိုယ်ကိုကိုယ်ငြင်းပယ်ရမည်။ ကိုယ်လက်ဝါးကပ်တိုင်ကိုနေ့တိုင်းထမ်း၍ ငါ့နောက်သို့လိုက်ရ မည်။” ( လုကာ ၉း ၂၃ )
ယေရှုက “အကြင်သူသည်” ( ခေတ်သစ်ဘာသာပြန်၌ “တစ်ဦးဦး” ) ဟု မိန့်ဆိုသည်။ သူသည် “ထူးခြားသန့်ရှင်းသူများ” ကို ရည်ညွှန်းထားခြင်းမဟုတ်ပါ။ ဤသို့ဆိုထားသည်။
အလွဲမယူပါနှင့်။ လူ့တို့၏ကုသိုလ်ကောင်းမှုသည် ကယ်တင်ခြင်းသို့ဖြစ်စေနိုင်သည်ကို ငါမယုံကြည်ပါ။ ကယ်တင်ခြင်းသည် ကျေးဇူးတော်သာဖြစ်သည်။ “ကိုယ့်ကုသိုလ်ကြောင့်မ ဟုတ်၊ သို့ဖြစ်၍ အဘယ်သူမျှ ဝါကြွားစရာအကြောင်းမရှိပါ။” ( ဧဖက် ၂း ၉ )
“အကြောင်းမူကား၊ သင်တို့သည် အလိုရှိစေခြင်းငှါ၎င်း၊ အကျင့် ကျင့်စေခြင်းငှါ၎င်း၊ သင်တို့အထဲ၌ စေတနာတော်အားဖြင့် ပြုပြင် တော်မူသောသူကား ဘုရားသခင်ပေတည်း။” ( ဖိလိ ၂း ၁၃ )
ဘုရားသခင်သည် သင့်အသက်တာထဲ၌ အလုပ်လုပ်သောအခါ သင်သည် မိမိကိုယ်ကို ငြင်း ပယ်လိုစိတ်ရှိလာပြီး ကိုယ့်လက်ဝါးကပ်တိုင်ကို ထမ်းလိုစိတ်ရှိလာမည်။ အပြစ်ကိုမြင်လာခြင်း လည်းရှိလာမည်။ ခရစ်တောထံသို့လာပြီး ခရစ်ယာန်တစ်ဦးအနေဖြင့် ဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းကို ဖြတ် သန်းလိုစိတ်ရှိလာမည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော်…..
“ငါတို့သည် များပြားသောဆင်းရဲဒုက္ခကို ခံ၍ ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံ တော်သို့ဝင်ရကြမည်ဟု မိန့်တော်မူ၏။” ( တမန် ၁၄း ၂၂ )
လူတစ်ဦးဦးက “ဤအရာသည် အလွန်ခက်ခဲနေမည်ဆိုလျှင် လူတစ်ဦးသည် အဘယ့်ကြောင့် ခရစ်ယာန်ဖြစ်လိုခဲ့သနည်း” ဟု မေးနိုင်ပါသည်။ အဖြေက ရိုးရှင်းပါသည်။
“တန်ခိုးတော်ပြသောနေ့ရက်ကာလ၌ ကိုယ်တော်၏လူတို့သည် သန့်ရှင်းသောတန်ဆာဆင်လျက်၊” ( ဆာလံ ၁၁၀း ၃ )
တတိယနိုင်ငံများစွာတွင် များစွာသောခရစ်ယာန်တို့သည် ၎င်းတို့၏ယုံကြည်ခြင်းတ ရားကြောင့် ဒုက္ခခံရခြင်းနှင့်ချုပ်နှောင်ခံရခြင်းတို့ရှိကြောင်းကို သိသည်။ သို့သော် သူတို့သည် ခရစ်တော်ကို အဆုံးရှုံးမခံကြပေ။ သင်တို့သည် သူတို့အကြောင်းကို www.persecution.com တွင် အင်တာနက်ပေါ်၌ ဝင်ရောက်ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။ ခရစ်တော်က “ယေရုရှလင်သို့ဦးတည် သွားခဲ့သကဲ့သို့” ( လုကာ ၉း ၅၁ ) သင်တို့သည်လည်း သူတို့လိုဖြစ်လာနိုင်သည်။ အကြောင်းမှာ “ခရစ်တော်သည် ခြေတော်ရာကို လိုက်လျှောက်စေခြင်းငှါ ပုံသက်သေကို ထားတော်မူသည်။” ( ၁ ပေ ၂း ၂၁ ) ကျွန်ုပ်တို့သည် ဒုက္ခဝေဒနာခံစားခြင်းအားဖြင့်သာ ရင့်ကျင့်သောခရစ်ယာန်ဘ၀ သို့ ရောက်ရှိနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ယုံကြည်ခြင်းတရား၌ သာ၍ သန့်ရှင်းပြီးသန် မာလာစေရန် ခရစ်ယာန်အသက်တာ၌ ဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းနှင့်ဘေးဒဏ်ကို ဘုရားသခင်က အသုံး ပြုထားပါသည်။ တမန်တော် ရှင်ပေါလုက ဤသို့ဆိုပါသည်။
“ထိုမျှမက၊ ဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းကိုခံ၍ ဝါကြွားဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိကြ၏။ အကြောင်းမူကား၊ ဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းသည် သည်းခံခြင်းကိုပြုစုတတ် ၏။ သည်းခံခြင်းသည်လည်း သက်သေထင်ရှားခြင်းကို ပြုစုတတ် ၏။ သက်သေထင်ရှားခြင်းသည်လည်း မြော်လင့်ခြင်းကိုပြုစုတတ် ၏။ ထိုမြော်လင့်ခြင်းသည် ရှက်ကြောက်စရာအကြောင်းနှင့်ကင်း လွတ်၏။ အဘယ့်ကြောင့်နည်းဟူမူကား၊ ငါတို့အားပေးတော်မူ သော သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည် ဘုရားသခင်၏မေတ္တာ တော်ကို ငါတို့စိတ်နှလုံးထဲသို့ ညွှန်းလောင်းတော်မူ၏။” ( ရောမ ၅း ၃- ၅ )
ထို့နောက် သင်သည် ထိုထပ်ဆိုကို သီဆိုနိုင်ပါမည်။ သင်တို့တွင် အချို့တို့အတွက် ယခုအကျိုး မရှိသည်ကို သိပါသည်။ သို့သော ကျေးဇူးတော်ကြောင့် အချို့သောသူတို့က နားလည်လာကြ ပေမည်။ အားလုံးမတ်တပ်ရပ်ပြီး တဖန် သီဆိုကြပါစို့။
အားလုံးထိုင်နိုင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့အတွက် သာဓကကို ထားခဲ့ရန်နှင့် ထိုမျှသောအဖိုးအခဖြင့် နောက်တော်သို့လိုက်ရန်လိုအပ်သည်ကို ကျွန်ုပ်တို့အားပြသရန် ခရစ်တော်သည် လက်ဝါးကပ် တိုင်ပေါ်သို့သွားခဲ့သည်။
၃။	တတိယအချက်၊ ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်ကို ကျေအေးစေရန် ယေရှုသည် လက်ဝါးကပ် တိုင်သို့သွားခဲ့သည်။
ယေရှုက ယာကုပ်နှင့်ယောဟန်တို့အား ဤသို့ဆိုသည်။
“အကြောင်းမူကား၊ လူသားသည် သူတပါးကိုစေစားခြင်းငှါမလာ၊ သူတပါးအစေကိုခံခြင်းငှါလာသတည်း” ဟု မိန့်တော်မူသည်။” ( လုကာ ၉း ၅၆ )
ယေရှုက ဇာခရိအား ဤသို့ဆိုသည်။
“လူသားသည် ပျောက်သောသူတို့ကိုရှာ၍ ကယ်တင်အံ့သောငှါ ကြွလာသတည်း” ဟု မိန့်တော်မူ၏။ ( လုကာ ၁၉း ၁၀ )
ယေရှုသည် လက်ဝါးကပ်တိုင်ပေါ်တွင် အသေခံခြင်းအားဖြင့် အပြစ်စီရင်ခြင်း၊ အပြစ်ဒုစရိုက် နှင့်ဘုရားသခင်၏အမျက်တော်ထဲက သင့်ကို ကယ်တင်နိုင်ပါသည်။ ယေရှုက သင့်ကိုယ်စားအ သေခံခြင်း၊ သင့်အပြစ်အတွက် လက်ဝါးကပ်တိုင်ပေါ်တွင် ပေးဆပ်ခြင်းအားဖြင့် သင့်ကို ကယ် တင်နိုင်ပါသည်။ ယေရှုသည် သင့်အပြစ်အတွက် ရန်ငြိမ်းခြင်းကိုပြုဖို့ လက်ဝါးကပ်တိုင်ပေါ်အ သေခံရန် “ယေရုရှလင်ဘက်သို့ စေ့စေ့မျက်နှာမူထားပါသည်။” ပရောဖက်ဟေရှာယက ဤသို့ ဆိုထားပါသည်။
“သခင်ဘုရားသည် ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်ရှိသမျှတို့ကို သူ့အပေါ်မှာ တင်တော်မူသည်။” ( ဟေရှာယ ၅၃း ၆ )
“မိမိစိတ်ဝိညာဉ်ခံရသောဝေဒနာ၏အကျိုးကို မိမိမြင်၍ အားရလိမ့် မည်။ ထိုဖြောင့်မတ်သောငါ၏ကျွန်ကို သိကျွမ်းခြင်းအားဖြင့်၊ သူ သည် အများသောသူတို့ကို ဖြောင့်မတ်ရာ၌တည်စေလိမ့်မည်။” ( ဟေရှာယ ၅၃း ၁၁ )
ခရစ်တော်သည် သင့်အပြစ်ကိုပေးဆပ်ဖို့ သင့်ကိုစား အသေခံရန် ယေရုရှလင်မြို့သို့ သွားခဲ့ပါသည်။ ထိုအကြောင်းအရာကို “ကိုယ်စားပြုအသေခံခြင်း” ဟုခေါ်သည်။ ဒေါက်တာ Charles Hodge က ဤသို့ဆိုသည်။
ကိုယ်စားပြုဒုက္ခဝေဒနာခံစားခြင်းဟူသည်မှာ အခြားသူတစ်ဦး၏ ( နေရာ ) တွင် တစ်စုံတစ်ဦးက ဝင်ရောက်ဒုက္ခဝေဒနာခံစားခြင်းပင် ဖြစ်ပါသည်။ (Charles Hodge, Ph.D., Ststematic Theology, Eerdmans, ၁၉၄၆၊ စာ- ၄၇၅ )
ဘုရားသခင်၏သားတော်ယေရှုခရစ်သည် သင့်ကိုယ်စား လက်ဝါးကပ်တိုင်ပေါ်တွင် အသေခံခဲ့ ပါသည်။ သင့်ကိုယ်စား လက်ဝါးကပ်တိုင်ပေါ်တွင် အသေခံသောအချိန်၌ သင့်အပြစ်အလုံးစုံ တို့အတွက် အခကိုလည်း ပေးခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။ သူ့ကို ယုံကြည်ကိုးစားပါ။ ကယ်တင်တော်မူ ခြင်းသို့ရောက်လိမ့်မည်။ ဟေရှာယကျမ်းစာက ဤသို့ဆိုပါသည်။
“ထိုသူသည် ငါတို့လွန်ကျူးခြင်းအပြစ်များကြောင့်၊ နာကျင်စွာထိုး ခြင်း၊ နှိပ်စက်ခြင်းကို ခံရလေ၏။” ( ဟေရှာယ ၅၃း ၅ )
“ကျမ်းစာလာသည်နှင့်အညီ ခရစ်တော်သည် ငါတို့အပြစ်ကြောင့် အသေခံတော်မူ၏။” ( ၁ ကော ၁၅း ၃ )
လက်ဝါးကပ်တိုင်ပေါ်၌ ခရစ်တော်၏အသေခံခြင်းက ဘုရားသခင်၏တရားမျှတမှုကို ကျေနပ် စေပါသည်။ ခရစ်တော်၏သေခြင်းက ဘုရားသခင်၏ပညတ်တော်ကိုလည်း ကျေနပ်စေပါ သည်။ ခရစ်တော်၏သေခြင်းက ဘုရားသခင်၏အမျက်တော်ကို ကျေအေးစေပါသည်။ ထို့ကြောင့် ခရစ်တော်၏သေခြင်းက ဘုရားသခင်နှင့်အပြစ်သားတို့ကို ရန်ငြိမ်းစေပါသည်။ ခရစ် တော်၏သေခြင်းက မာရ်နတ်၏တန်ခိုးမှ ကျွန်ုပ်တို့ကို လွတ်မြောက်စေပါသည်။ ထိုအကြောင်း ကြောင့် ယေရှုသည် ကောင်းကင်မှမြေကြီးပေါ်သို့ ဆင်းသင်လာရခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ယေရှုသည် လက်ဝါးကပ်တိုင်ပေါ်တွင်အသေခံရန် “ယေရုရှလင်သို့ဦးတည်သွားခဲ့သည်။” ( လု ကာ ၉း ၅၁ ) လက်ဝါးကပ်တိုင်၌ ၎င်း၏သေခြင်းသည် သင့်အပြစ်ကို ကျေအေးစေသည်။ သင် သည်လည်း ထာဝရကာလတိုင်အောင် ကယ်တင်တော်မူခြင်းသို့ရောက်လိမ့်မည်။ ဘုရားသခင် သည် သင့်အား ယေရှုခရစ်နှင့်နီးစေရန် ကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပဌနာပြုခဲ့ပါသည်။ အားလုံးမတ် တပ်ရပ်ပြီး သီချင်းနံပါတ် ၁ ကို သီဆိုကြပါစို့။
ခရစ်တော်၏မေတ္တာကိုထင်ရှားစေသော နာကျင်ခြင်းဝေဒနာ အဘယ်မျှလောက် ပြင်းထန်ပါမည်နည်း။ ထိုဒဏ်ရာချက်များက ရန်ငြိမ်းစေသောအသွေးကို စီးဆင်းစေ၊ ရန်ငြိမ်းစေသောအသွေးကို စီးဆင်းစေ။
အသွေးများယိုစီးထွက်လာသော ဆူးရစ်သရဖူ ခရစ်တော်၏ဦးခေါင်းတော်ပေါ်မှာ တင်ကျန်
ခြေလက်များကို ထိုးသွင်းသောသံမှိုသံချက်များ အဘယ်မျှလောက်ပြင်းထန်မည်၊
အပြစ်ရှိသောသူအဖြစ် သူ၌ တွေ့မြင်ကြရသောသူအပေါင်းတို့၊ လာကြ။
ကယ်တင်သောအသွေးတော်ဖြင့် ဆေးကြောခြင်းခံရန်လာ၊ ရှိသမျှကို သန့်ရှင်းစေ မည်။ ရှိသမျှကို သန့်ရှင်းစင်ကြယ်စေမည်။
( “ယေရှု၏ဒဏ်ရာများ” Edward Caswall, ၁၈၄၉၊
“ပလ္လင်ထက်က ခန်းနားသောချိုမြိန်ခြင်းများ” သံစဉ်ဖြစ်သည်။ ).
“ယေရှုဝေဒနာခံခဲ့"၊(Edward Caswell, ၁၈၄၉၊ ရေးစပ်ပြီး “ပလ္လင်ထက်ကစိုးစံသော ခန်းနားထည်ဝါသောချိုမြိန်ခြင်း” သံစဉ်ဖြစ်သည်။ )
ဒုက္ခခံရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည် အကျဉ်းချုပ်
“ကောင်းကင်သို့ဆောင်ယူခြင်းကိုခံတော်မူသောအချိန်ရောက် သောအခါ၊ ယေရုရှလင်မြို့သို့ တူရှုကြွအံ့သောငှါ သဘောထားတော်မူ၏။” ( လုကာ ၉း ၅၁ )
၁။	ပထမအချက်၊ ခရစ်တော်သည် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် လက်ဝါးကပ်တိုင်ဆီ သွားခဲ့ ပါသည်။ လုကာ ၉း ၂၂၊ ၄၄-၄၅၊ ၁၈း ၃၁- ၃၄၊ လုကာ ၂၄း ၄၅-၄၆၊ ၁ ကော ၁၅း ၁-၄၊ ယောဟန် ၂၀း ၂၂၊ ၂၄- ၂၈၊ ယောဟန် ၁၈း ၄၊ ဟေဗြဲ ၁၂း ၂။
၂။ ဒုတိယအချက်၊ ခရစ်တော်သည် သာဓကထားခဲ့ရန် လက်ဝါးကပ်တိုင်ဆီသို့ သွားခဲ့သည်။ ၁ ပေတရု ၂း ၂၁၊ လုကာ ၉း ၂၃၊ ဧဖက် ၂း ၉၊ ဖိလိ ၂း ၁၃၊ တမန် ၁၄း ၂၂၊ ဆာလံ ၁၁၀း ၃၊ ရောမ ၅း ၃-၅။
၃။	တတိယအချက်၊ ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်ကို ကျေအေးစေရန် ယေရှုသည် လက်ဝါးကပ် တိုင်သို့သွားခဲ့သည်။ လုကာ ၉း ၅၆၊ ၁၉း ၁၀၊ ဟေရှာ ၅၃း ၆၊ ၁၁၊ ၅၊ ၁ ကော ၁၅း ၃။